Writer keessatti, ajajani Yaadannoo - Saagi ykn Command+Option Ctrl+Alt korkoddii yaadannoo qubannoo qarree ammeetti saaga. Yadannoon mudana fuulaatti mul'ateera, bakka barruu yaadannoo keessatti galchuu dandeessutti. Sararri sanduuqa yadannoo fi korkoddii walqabsisa.
Calc, Fakkaasi, fi Toleessaa keessatti, Ajajni Saagi - Yaada yaada saaga.
Maqaa barreessaa, guyyaa fi sa'atiin yaadannoo kana uumuun gara jala yaadannootti mul'ateera.
Fayyadamaan kamiyyuu hayyama barreessuu galmee barrutti yaadannoowwan barreessota maraa gulaaluu fi haquu ni danda'a.
Sanduuqni yaadannoo sajoo xiyya gadee waliin hammata. Yaadannoowwan haquuf baafata ajajawwan muraasa waliin banuun sajoo cuqaasi.
Yaadni barruu galmee keessaa yoo barreessaa birootin barreeffameera ta'e, baafata halqaraa keessatti ajajni deebisi jedhu jira. Ajajni kun yaada haaraa hiixuu yaada ati itti deebisuu barbaaddetti saaga. Yaadni korkoddii yaadoota lamaaniif wal fakkaataa dha. Barruu deebisaa kee yaada haaraa irratti barreessi. Galmee kee gara barreessitoota birootti ol kaa'i akkasumas ergi, kana booda barreessitootni kun deebisa ida'uu danda'u, baay'eetti.
Qaaqa Barbaadi & Bakka buusi galmeewwan barruu keessatti, barbaada kee keessatti barruuwwan yaadootaa dabaluuf filachuu ni dandeessa.
Qareen yoo keessa yaadaa ta'e, Ajaja+Dirqala Ctrl+Alt+Page Down gara yaada itti aanuutti ce'uuf, yookaan Ajaja+Dirqala Ctrl+Alt+Page Up gara yaada darbeetti ce'uuf dhiibuu dandeessa.
Qareen yoo barruu baratamoo keessa jiraate, gara yaada korkoddii itti aanutti yookaan darbeetti ce'uuf furtuuwwan gubbaatti eeraman dhiibi. Akkasumas yaada korkoddii tokko irraa gara yaada korkoddii itti aanuutti ce'uuf, fooddaa naana'insaa xiqqoo sarjaa kabala maraa jala jiru fayyadamuu dandeessa.
Tarree galmee mara ilaaluuf dabalataan Naanna`aa banuu ni dandeessa. Yaadannoo Naanna`aa keessaa gulaaluuf ykn haquuf maqaa yaadannoo mirga-cuqaasi.
Amaloota wanta yaadannichaa jijjiiruuf, fakkenyaaf, halluu duubbee Mul'isa, Yaada Agarsiisi akka guubbaattii fili, ittaansudhaan yaadannicha mirga-cuqasi (barruu lama hin cuqaasiin).
Qubannoo ykn hammamtaa yaadannoo jijjiiruuf, handaara ykn xiyyoo yaadannoo harkisi.
Ajajawwan gulaali tokko tokko foddaa Naanna`aa keessaa filuudhaaf dabalataan maqaa yaadannoo mirga-cuqaasuu dandeessa.
Dirqaalee maxxansuu yaadannoowwani wardii kee keessaa qindeessuuf, Dhangii - Fuula fili, ittaansuudhaan caancala Wardii cuqaasi.
Impress keessatti, islaayidii maraaf fuula barreessuuf mul`annoo yaadannoowwani gargaaramtu filuu ni dandeessa. Dabalataan, islaayidii keetti yaadannoowwan galchuu ni dandeessa.